Debian 10.3 uye 9.12 vasvika vachigadzirisa zvikanganiso zvakati kuti zvekuchengetedza | Linux Vakapindwa muropa
Purojekiti Debian yakagadzirisa yazvino vhezheni yayo yekushandisa system vhiki ino. Kunyanya zvakanyanya, ivo vane yakaburitswa Debian 10.3 uye Debian 9.12, ayo ari maviri mavhezheni eshanduro maakanangana nekugadzirisa zvikanganiso zvekuchengeteka uye madiki madudu. Izvi hazvisi makuru ekuburitswa anowedzera nyowani maficha, asi asi izvo izvo zvinozovandudza mushandisi ruzivo uye zvive zvakachengeteka zvakanyanya kupfuura zvakapfuura shanduro.
Sezvo nekuburitswa kwese kutsva, Debian yatora mukana wekugadzirisa iyo kernel yemaitiro ayo anoshanda. Muchiitiko che "Buster", iyo kernel yavakaisa iri Linux 4.9.0-18, vachiri mune iyo "Tambanudza" ivo vaisa Linux 4.9.0-12. Heano mamwe (mashoma) enhau akave akaiswa mune idzi vhezheni.
Pfungwa dzeDebian 10.3 / 9.12
Inogoneka Stack Underflow mu e2fsck.
Dzazvino shanduro dzeLinux 4.19.
NVIDIA Binary Mutyairi Dudziro.
Kugadziriswa kwekuchengetedza kwePython 3.7.
Yakagadziridzwa mapakeji, senge yazvino vhezheni yeFirefox ESR paDebian 9.12.
Kuchengetedzwa uye kugadzirisa kuita. Pakati pekugadziriswa kwekuchengetedza isu tine bhagi mu "Sudo".
Ndokumbira utarise kuti kuburitswa kweruvara hakuiti vhezheni itsva yeDebian 10 asi inongogadziridza mamwe emapakeji akaisirwa. Iwe haufanire kurasa yekare "Buster" midhiya. Mushure mekumisikidza, mapakeji anokwanisa kuvandudzwa kushanduro dzazvino vachishandisa yakagadziridzwa Debian girazi.
Vashandisi varipo vanogashira ese nhau kubva kune yekushandisa system inogadziridza application. Ivo vanoda kuisa vhezheni idzva vanofanirwa kurodha pasi kubva Iyi link. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvenhau dzese dzaburitswa idzi, unogona kuwana iyo kusunungura manotsi yeDebian 10.3 kubvira pano uye Debian 9.12 kubva pano. Iyo inotevera vhezheni ichave yatove a Debian 11 "Bullseye" izvo zvinosvika… kana vazvigadzirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 10.3 uye 9.12 vasvika vachigadzirisa zvikanganiso zvakasiyana siyana zvekuchengetedza uye zviputi
AppCenter inoda kuve Linux software hub kuitira kuti vanogadzira vabhadhare